मान्छे कमाएर होइन कमाएको पैसा बचत गरेर धनी हुन्छ- जान्नुहोस् पैसा बचत गर्ने यो मन्त्र – Sudur Samaj
मान्छे कमाएर होइन कमाएको पैसा बचत गरेर धनी हुन्छ- जान्नुहोस् पैसा बचत गर्ने यो मन्त्र
कुनैपनि व्यक्ति कमाएर होइन, बचत गरेर धनी हुन्छ । किनभने जति कमायो उति खर्च गर्ने मानिस कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दैन । तर, आफ्नो कमाईबाट बचत गर्दै थप लगानी गर्दै अघि बढ्ने मान्छे अवश्य धनी हुन्छ । धनी बन्न त्यति सजिलो छैन । मान्छे न कमाएर मात्रै धनी हुन्छ, न त बचत गरेर मात्रै ।
प्रत्येक समय उपयुक्त निर्णय गर्दै पैसाको सदुपयोग गर्न सक्ने मान्छे मात्रै धनी हुन्छ । यस्तो गर्नसक्ने क्षमता एकदमै कमसँग मात्रै हुन्छ ।अर्थशास्त्री स्टुअर्ट रदरफोर्डले भनेका छन्– बचत धनी मानिसले मात्र गर्ने कुरा होइन बरु यो गरिबहरुको साथी हो । आफ्नो कमाइबाट नियमितरुपमा बचत गर्न सक्ने हो भने गरिब मानिस पनि धनी बन्न सक्छ ।
तर, २ र ४ हजार बचत गरेर के नै हुन्छ र रु भन्ने मानिस जुन अवस्थामा छ, त्यहाँभन्दा माथि उठ्न निकै कठिन हुन्छ ।आजको स-सानो बचतले भोलि तपाईलाई ठुल्ठुला आर्थिक भारबाट जोगाउन सक्छ । त्यसैले आफ्नो कमाइबाट बचत गर्नुहोस् । तपाईं जति कमाउनुहुन्छ पहिला त्यसको हिसाब गर्नुस् र, आफ्नो आम्दानीबाट कति रुपैयाँ बचत गर्ने ?
त्यो यकिन गर्नुहोस् । म यति रुपैयाँचाहीँ बचाउँछु भनेर तपाई लाग्नुभयो भने मात्रै तपाईंले फजुल खर्च कटौति गर्न सक्नुहुन्छ ।
एकदिन, एक महिना वा एक वर्ष मात्रै बचत गरेर पनि हुँदैन । तपाईंले सँधैका लागि बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । एक वर्षसम्म दैनिक १० रुपैयाँ मात्रै जम्मा गर्ने हो भने एक वर्षमा करिव ३,६५० रुपैयाँ हुँन्छ ।
तपाईं सि’गरेट पिउनुहुन्छ भने दिनको एउटा सि’गरेट कम गर्नुहोस् । र, त्यो पैसा बचत गर्नुहोस् ।अनि यसरी बचत गरेको पैसा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाहरुमा राख्नुहोस् । यी संस्थाहरुले ब्याज दिन्छन् । र, तपाईको पैसाको सुरक्षा पनि राम्रो हुन्छ ।बैंकको ब्याजले मात्रै पनि पुग्दैन । त्यसैले यसरी बचत गरेको पैसाले बीमा गर्नुहोस् ।
बीमा गर्नुभयो भने तपाईंले आफ्नो लाखौंको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सक्नुहुन्छ । बीमा गर्नका लागि खर्च गरिएको रकम पनि बचत नै हो ।खर्च गर्नुअघि १० पटक सोच्नुहोस् कि यो मेरो आवश्यकता हो कि होइन भनेर । यदि तपाईंको आवश्यकता होइन भने खर्च गर्नतिर नलाग्नुहोस् ।
बचतको सुत्र के हो ? धेरै जसो मानिसको सोचाई आफुले खर्च गरेर बाँकि भएको रकम बचत गरौ न भन्ने हुन्छ तर वास्तबमा बचत भनेको खर्च गरेर बाँकि भएको रकम मात्रै होइन । बचत भनेको आफुले खर्च गर्नु अगाडी नै आफ्नो आम्दानीबाट केही रकम वा सामान भविष्यको लागि भनेर छुट्टयाएर राख्नु हो ।
खर्च गर्नु अगाडी नै तपाईसँग मासिक कति रकम के कामका लागि दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक रुपमा जम्मा गर्ने भनि प्रष्ट योजना हुनु पर्छ। दैनिक ५० रुपैया मात्रै जम्मा गर्दा पनि तपाइले बार्षिक करिव १८ हजार रुपैया भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ । बचत कसरी गर्न सकिन्छ ?
खर्च गरेर बाँकि भएको पैसा मात्रै हैन, खर्च गर्नु भन्दा पहिला नै केही रकम बचतको लागि छुट्याएर आफ्नो बास्तविक आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेर त्यसमा मात्रै खर्च गर्ने र फजुल खर्चहरु कटौती गरेर भई रहेको आम्दानी भन्दा अझ धेरै आम्दानी गरेर (जस्तै: नयाँ व्यापार, व्यवसाय सुरु गर्ने, नयाँ मेसिन औजार, घर-जग्गामा लगानी गर्ने) नयाँ सम्पत्ति वा काममा लगानी गर्दा सधै राम्रोसँग बुझेर
(जस्तै: वैदेशिक रोजगारीमा जादा राम्रोसँग जानकारी नलिई जादा ठगीमा परी डुब्न सकिन्छ र आफ्नो भविष्यको लागि बचत गर्न सकिने रकम त्यसै अर्काको हातमा पर्न जान्छ) आफ्नो कुनै कुलत बानीहरु छन् भने त्यसलाई तत्काल हटाएर (जस्तै: चु’रोट, र’क्सि, खैनी, सुपारी, गुड्खा, पान आदी) आफ्नो र परिवारको भविष्यको राम्रो ख्याल गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुराहरुमा लगानी बढाएर अनि विहे, ब्रतबन्ध, का’जक्रियामा आदिमा देखावटी, तामझाम र भड्किलो खर्च नगरी साधारण रुपमा गरेर
आफू सधै मेहेनती, जाँगरिलो र उद्यमशिल बनेर उपचारमा ठुलो खर्च बेहोरेर उ’ठिबास हुनु भन्दा पहिलेबाट नै आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गरेर जो’खिमहरु कम मोल्ने र सुरुबाट नै विमा गरेर (जस्तै: कौडा, तास, जुवा आदी खेलेर छोटो समयमै राम्रो पैसा कमाई बचत गरौला भन्ने आशमा आफ्नो घर-जग्गा नै दाउमा नराख्ने)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचतको लागि विभिन्न स्किमहरु पनि हुन्छन् (जस्तै: बाल बचत, महिला/नारी बचत, शिक्षा बचत, मुद्धती (केही समयको लागि पैसा निकाल्न नमिल्ने तर साधारण भन्दा धेरै ब्याज पाइने) बचत आदी आफूलाई सुहाउदो बचत खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ
प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ पुगेपछि, विधुत प्राधिकरणले कि’न्न छो’ड्यो भारतीय बि’ज्जुली”